ဆုတောင်းတိုင်းသာ…ပြည့်မယ်ဆိုရင်လား…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆုတောင်းတိုင်းသာ…ပြည့်မယ်ဆိုရင်လား….
Posted by alinsett on Aug 7, 2014 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary, Think Different | 17 comments
ဆုတောင်းခြင်းနဲ့...ဆုတောင်းပြည့်ခြင်း အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား
တွေ့ ရသမျှကို…ဟိုဟိုဒီဒီ…လျှောက်တွေးမိတဲ့သူ.… ။
တွေးမိသမျှကို.. ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ …ချ ချရေးပြီး…
ဟိုလူဒီလူတွေ… ကိုယ်ရေးထားတာကိုဖတ်ပြီးဘာများပြောကြလေမလဲ..လို့ …
ဒါနဲ့ ပဲ… အခုလိုဟိုဟိုဒီဒီအတွေးတစ်စ…
ဒါမှမဟုတ်… သူတို့သူတို့ …အမြင်တွေကပဲ…စောင်းနေလေသလား.. ။
ကျွန်တော်က. . .
သူတို့ သူတို့ …အများစုရဲ့အမြင်ကို… မှားတယ်..လို့ပြောရမှာတော့… ခပ်လန့်လန့်ရယ်… ။
အများညီလို. ..”ဤ”ကို”ကျွဲ”လို့သံပြိုင်အော်ဟစ်နေကြပြီပဲ… ။
(ဒါမှမဟုတ်… ကျွန်တော်ကများ… ကျွဲကို…ဤ ထင်နေတာလား… ။ အမှန်တရားတော့…ရှိလိမ့်မယ်…)
တကယ်တော့… ”ဤ”နဲ့ ”ကျွဲ”ဟာ…အမှန်တရားတစ်ခုစာ…..ဝေးကွာပါတယ် ။
”အမှန်သိမှု”ကို…ချောင်ထိုးတတ်တဲ့ စိတ်နေသဘောထားနဲ့ မှ… ဤ ကို.. ကျွဲထင်မှာ… ။
”ဤ”ကို… ”ကျွဲ” ထင်ပြီး…အမှန်မသိခြင်းတောထဲမှာ….ပျော်နေရမှာ…ရှက်စရာကြီးပါ… ။
ဆုတောင်းပြည့်တယ်…ဆိုတဲ့…ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုတွေ့ ရတယ်… ။
ဆုတောင်းသံတွေ… ညံနေတယ်… ။
အကျိုးလိုလို့ …ညောင်ရေလောင်းသံတွေ… ညံနေတယ်… ။
ညောင်ပင်လေး..ရေလိုလို့ ..ရေလောင်းပေးတာ..မဟုတ်တော့ဘူးလား.. ။
”ရေလောင်းပေးရသော…အကျိုးအားကြောင့်… ဘာဖြစ်ရပါလို၏..ညာဖြစ်ရပါလို၏… ”
” နင့်အသက် တစ်ခါလွှတ်…. ငါ့အသက်…ဆယ်ခါလွတ် ”
တစ်ခုခုပေးဆပ်လိုက်ရင်… တူသောအကျိုးတစ်ခုခု ပြန်ရမှာ…သေချာသလား.. ။
ကိုယ်ကပေးတာတော့… ဟုတ်ပါရဲ့…. တချိန်ကျရင်…ပြန်ရမယ်…တဲ့…
သေချာတယ်..ဆိုရင်… ထူးပြီး..တောင်းနေစရာမလိုဘူးလေ…… ။
ကိုယ်ကတစ်ခုခုပေးလိုက်လို့တစ်ခုခု ပြန်ရမှာသေချာတယ်ဆိုတဲ့…အယူအဆအရ…ဆိုရင်…
ဒါဟာ… ကိုယ့်ဘာမှ.…ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ မလိုတဲ့… စနစ်တကျစီမံပြီးသား ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့… ။
ဒီလိုပြုရင်…ဒီလိုဖြစ်မယ်… ဟုတ်သလား.. ။
” တစ်ခုခု ပြုပြီး… ကိုယ်လိုချင်လို့ …တောင်းလိုက်တဲ့အရာ ” နဲ့ …
” ပြုခြင်းရဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု…ဖြစ်လာမယ့် အကျိုး”
( ပြန်ရမယ့် အရာ ) ထပ်တူကျနိုင်ပါ့မလား.. ။
ကိုယ်က… ပန်းတစ်ပွင့်ပေးလိုက်တယ်… ။
တချိန်မှာ… ပန်းဆယ်ပွင့်…ပြန်ရပါစေ…လို့ …ဆုတောင်းလိုက်မယ်… ။
ကိုယ်တောင်းသလို… ပန်းဆယ်ပွင့်… ပြန်ရနိုင်သလား… ။
ပန်းဆယ်ပွင့် မဟုတ်( ပန်းတစ်ပွင့်တောင် မဟုတ်ပဲ) သစ်ရွက်တစ်ရွက်သာ…ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာရော…
ဆုတောင်းခြင်းကို… ကျွန်တော်… သံသယထားမိနေတာ ကြာပြီ… ။
ဆုတောင်းခဲ့ဖူးသမျှ…ဘာမှ ဖြစ်မလာတတ်လို့ …
ကိုယ်ဘယ်လောက် ပေးဆပ်ရပါစေ… ကိုယ်ပေးရသလောက် ပြန်မရတတ်လွန်းလို့ …
ကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေနဲ့မှ…ထ မလုပ်ရင်… ထမင်းတစ်လုပ်စားရဖို့ တောင်…ခက်ခဲလွန်းလို့ …
ယုံကြည်တဲ့သူတွေ…လုပ်တဲ့… အဲဒီဆုတောင်းခြင်းဟာ… ကျွန်တော်နဲ့တိုက်ရိုက် မသက်ဆိုင်တဲ့အရာ….
အဲဒီလိုပဲ… ကျွန်တော်…ခံယူထားလိုက်တယ်.. ။
ဘယ်သူတွေ… ဘာဆုတောင်းလို့ ….ဘာတွေပြည့်သလဲ…
လက်တွေ့ ကျကျ စစ်တမ်းကောက်လိုက်ချင်တယ်… ။
ဘာတစ်ခုမှ လွယ်လွယ်မရတဲ့ …ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ….
ဆုတောင်းလို့ … ပြည့်တယ်..ဆိုတာတွေ….
ဆုတောင်းပြည့်လို့ …ဆုတောင်းစမ်းပါ…ဆိုတာတွေဟာ…အိပ်မက်များ…ဆန်နေသလားလို့ … ။
ကျွန်တော်… အိပ်မက်… မမက်တတ်ဘူး.. ။
အိပ်မက် မက်ရတာထက်…တကယ် လက်တွေ့ ဖြစ်လိုက်ရတာကို…ပိုသဘောကျနေပြီ… ။
တကယ်ကြီးလည်း..မဟုတ်ပဲနဲ့ … အိပ်မက်ဆိုးကြီးတွေမက်ပြီး..
ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေ ကျပြီး…လန့်နိုးရတာ… ပင်ပန်းပါတယ်.. ။
ပြီးတော့… ပြန်ပြောပြ…ဆိုတော့လည်း..ရေရေရာရာမမှတ်မိတော့ပဲနဲ့များ ။
”တကယ်”ဆိုရင်တောင်… အတွေ့ အကြုံရလို့ …အကျိုးရှိဦးမယ်… ။
ဒါကြောင့်… အိပ်မက်ဆန်တဲ့ … အရာတွေကိုလည်း..သိပ်မကြိုက်ဘူး… ။
(၁) ရေးရင်တောင်…တစ်ဖက်လှန် ဖတ်တဲ့လူကြောင့်.. (င) ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့လောကကြိ်ီး…
ဆုတောင်းပြည့်သွားသူတွေ…ဘယ်လောက်များလဲ….သိချင်လာတယ် … ။
သူတို့ တောင်းတဲ့ ဆုတွေအတိုင်း…တကယ်ပြည့်တဲ့သူတွေ….ဘယ်လောက်များလဲ….
( မိတ်ဆွေများ…လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပါစေ… )
27 /7/ 2014 / 20 : 10
သဂျီး အကြိုက် ကစားကွင်းဘဲကွ
ပြီးရင် ထေ တို့ ဝါဒ တို့နဲ့ အပစ်ဖို့တော့မယ်
ဆုတောင်းဆိုတာ မိမိအတွက်အားမာန်တစ်ခု အဖြစ်ပြန်လည် ရပ်တည်လာမှ ထိုဆုတောင်းသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လတ္တံ။
ဆုတောင်းပြီးရင်… အဲဒီဆုတောင်းလေး ဘယ်တော့ပြည့်လာမလဲ…လို့ 
မျှော်လင့်ရတာ ပင်ပန်းတယ်.. ။
ဒီတော့…ဆု မတောင်းဖြစ်တော့ဘူး…လေး ခ ရေ..
ဆု ကို မတောင်းသလောက် ရှားတယ်။
ဆုတောင်းရလောက်အောင် လိုချင်တာလည်း မရှိခဲ့ဖူးးးး
ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရ လက်တွေ့ကျကျနေရာမှာ နေရာမှာနေရတော့၊
နောက်ပြီး အဲဒီနေရာက ဆုတောင်းပြည့်စေတီတို့ ဘာတို့လည်း မရှိဘူးး၊ (အဟွတ် ) ဆု မတောင်းတတ်တော့။
စု ပဲ တောင်းချင်တယ်။
စု ပဲ ရစေချင်တယ်။
စု ပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။
မေမြို့ က ပြည်ချစ်ဘုရားရယ်၊ ပုဂံ က အလိုတော်ပြည့် ဘုရားရယ်ကတော့ ဆုတောင်းပြည့်တယ်။ ကိုယ်တွေ့။
နောက်ဆုံး တကယ်ကြီး ရချင်တာရှိတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ သစ္စာဆို လေ။
ဟုတ်တာပဲ လုပ်ခဲ့ လုပ်ခဲ့၊ မဟုတ်တာပဲ လုပ်ခဲ့ လုပ်ခဲ့ မှန်တာကို ဆိုတဲ့ သစ္စာတိုင်းက စူးဆဲပဲ။
မနက်စောစော ရေးချင်ရာရေးသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါနော်၊.
၊မမဂျီး ဒီရက် ဂေါက်နေလို့။
မေမြို့ နဲ့ ပုဂံ ရောက်ဖူးချင်တယ်.. ။
ဘုရားတွေနဲ့ ။။နေရာဒေသကို.. .သွား..ကြည့်ချင်လို့ ..
ဘာလုပ်လို့ ဘာလှူလို့ ဘာဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ ဆုမျိုး မတောင်းခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ …
ကိုယ်လုပ်တဲ့စေတနာမှန်ရင် ကောင်းသောကုသိုလ်ကံမျိုးစေ့ဖြစ်ပြီး အကျိုးပေးတာတော့ အမှန်အကန်ပါပဲ ..
အစားအသောက်လှူဒါန်းတယ်ဆိုပါစို့ .. တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာ တကယ့်စေတနာအစစ်အမှန်နဲ့ ဖြူဖြူစင်စင်လှူဒါန်းတယ်ဆိုပါစို့ .. ဘာဆုမှမတောင်းသော်လည်း အဲဒီစေတနာက အကျိုးပေးမှာသေချာပါတယ် … ဘယ်အလုပ်မှာမဆို စစ်မှန်ဖို့နဲ့ လောဘစိတ်မထားဖို့တော့ အရေးကြီးတယ် ..
ဆုတောင်းနေစရာမလို ထိုက်သင့်တဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ ယုံကြည်စေချင်တယ် ..
ဆုတောင်းနေစရာမလို ထိုက်သင့်တဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ ယုံကြည်ချင်ပါတယ်..
အဓိဌာန် ပြုတာမျိုး တော့ လုပ်ဖြစ်တယ်။
ဘုရားရှိခိုးတိုင်း အကျင့် ပါနေတာလဲ ပါမှာပေါ့။
ဒီတိုင်းကြီး ဘာမှ ကြိုးစားအားထုတ်မှု မရှိဘဲ
ဘုရားရှိခိုး အလှူတွေ လုပ်ပြီး ဆုတောင်း နေတာမျိုး ကျတော့ သိပ် မဟုတ်သေးဘူးလားလို့။
လူတွေ တော်တော်များများ က မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ ဆိုတာကြီး ကို မေ့နေကြသလိုပဲ။
ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ် ထင်ပါတယ် အဲ့မှာ ရေးထားတာ “မြတ်စွာဘုရားရှင်တောင် မှ ဒီ လောကီလူ့ဘောင် အရှုပ်က နေ ကင်းလွတ်ဖို့ တရားကျင့် တရားဟော လုပ်သွားရတာ အဲ့ဒီလို ပုဂ်ဂိုလ် ကိုမှ ကြီးပွားချမ်းသာဖို့တို့ တွေ ဆုသွားတောင်း တယ် ဆိုတော့ကာ…..” တဲ့။
ဆရာ ဖေမြင့် ဘာသာပြန်တဲ့ ဘေဘီလုံမှာ အချမ်းသာဆုံး ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ ကျတော့လဲ
ကောင်လေးတစ်ယောက် က အလုပ်မှာ လစာ တိုးချင်လို့ တဲ့
အဲဒီတော့ လစာ တိုးအောင် မင်း ဘာလုပ်ပြီးပလဲ မေးကြည့်တော့ သူဌေး ဆီမှာ လစာ တိုးတောင်းတာ အခေါက်ခေါက် ရှိပါပြီပေါ့လေ။
အဲ့ဒီမှာ ဘာပြောသလဲ ဆိုတော့ ဒီကောင်လေးရဲ့ လစာတိုးချင်တဲ့ စိတ်က ထက်သန် နေတယ် ဒါကြောင့်လဲ သူဌေးဆီ သွားသွားပြီး လစာ တိုးတိုး တောင်း နေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန် မှားနေတယ် တဲ့။
ဆိုတော့ကာ ခု ဆုတောင်း နေကြတဲ့ လူတွေ ကိုလဲ လိုချင်တာ ရဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူတွေ ဒါပေမယ့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန် မှားနေတယ် လို့ပဲ ပြောရတော့မလားပဲ။
အဓိဌာန်က ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို ရည်ရွယ်ပြီး ဆန္ဒပြုလိုက်တဲ့သဘောလေး ပါတယ်။
ဒါက လက်ခံလို့ရတယ် ။
ဆုတောင်းပြည့်တယ်တို့ ဘာတို့ကို သိပ် စိတ်မပါတော့တာ. .
ဗုဒ္ဓကတော့.. ဆုတောင်း/ဆုယူကို အယုံအကြည်မရှိခဲ့ပါဘူး..။
Luck/Unluck ဆိုတဲ့.. မြန်မာတွေပြောပြောနေတဲ့.. ကံကောင်းတယ်/ ကံဆိုးတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဗုဒ္ဓက.. တရားနဲ့ရှင်းပြပြောတာ… မရှိပါဘူး..
အရာရာက.. အကျိုးအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်.. ရှိတယ်.. Cause and effect ဆိုတာကိုပြောဟောခဲ့တာမှာ.. ကမ္ဘာကျော်တာပါ…။
ထာဝရဘုရားသခင်က.. စင်္ကြာဝဌာနဲ့တကွ.. ကမ္ဘာ.. ပင်လယ်ရေမြေတောတောင်..လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်လေ..။
ဖန်တီးရှင်(Creator God)ဆီမှာ.. ဖန်ဆင်းခံက..လိုချင်တာဆုတောင်းယူရတာပေါ့…
ထေရ်တို့ရဲ့ဝါဒမှာတော့.. ဆုတောင်း/ဆုယူကို.. ဖန်တီးရှင်ဝါဒကနေ.. ကော်ပီကက်လုပ်တာတချို့ရှိပုံရကြောင်း…
ဆုတောင်း/ဆုယူမယုံကြည်သူဟာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်လို့.. ထင်ကြောင်း..။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဟာ . . .
အိပ်မက်မဆန်တဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ကျင့်ကြံ အားထုတ်သူပေါ့နော် သဂျီး
ခံစားချက် တူညီသွားတော့ ကြိုက်ပြီပေါ့
ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု comment လေး ချီးမြှင့်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ဦးကြီး ရေ
အမှန်တော့ ဒီပိုစ့်ကို ကျနော့်ထုံးစံ အတိုင်း အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် အရေးအသားနဲ့ ရေးထားတာ
အဲ ရေးပြီးမှ ပြန်ဖတ်တော့ တော်တော်မိုးမွှန်နေတာတွေ့ တယ်
မိုးမွှန်အောင် အဆဲခံရမယ့်ကိန်းလည်း မြင်လိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ အစကနေ အဆုံးထိ ပြန်ပြင်ရေးတာ
ညင်သာတဲ့ စကားလုံးတွေ ရွေးပြီး
သာမန်အက်ဆေးတစ်ပုဒ်လို ဖြစ်အောင် ပြန်ပြင်ပြီးမှ
အားပေးကြတဲ့ စာဖတ်သူများ အားလုံးကို ဇူးဇူးပါ
ဟိန္ဒူတွေကနေ..ကော်ပီကက်တာများသွားတဲ့.. ထေရ်တို့ရဲ့ဝါဒအပေါ်လက်ရှိရပ်တည်နေမှုနဲ့.. ဟိန္ဒူတွေရဲ့အမြင်ကို.. လှစ်ပြတဲ့..သတင်းလေးတခုတွေ့လို့..
ပြောရရင်.. ထိုးင်း/ဘန်ကောက်က.. မြန်မာသံရုံးရှိတဲ့လမ်းဟိုဖက်ထိပ်.. ဟိန္ဒုဘုရားကျောင်းထဲမှာလည်း.. ဗုဒ္ဓကို.. ဆင်းတုထားကိုးကွယ်ထားတယ်..။
မြန်မာပြည်က.. ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေတော့.. မ၀င်ဖူးလို့မသိ..။ ကြုံဝင်ဝင်ကြည့်..။ ဆင်းတုသေချာပေါက်ရှိ..
တကယ်တော့.. ဟိန္ဒူဝါဒက.. ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပါ..။ ကမ္ဘာ့အစောဆုံးဝါဒကြီးတခုပေါ့..။
ဂေါတမဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်.. ဒိဌိဝါဒဆိုပြီး.. တော်တော်တိုက်ယူပြင်ခဲ့ရတဲ့ဝါဒဖြစ်ပါတယ်.။
အဆုံးတနေ့တချိန်ကျတော့.. ဗုဒ္ဓပွင့်ရာဒေသ.. မဇ္ဇျိမအပါအ၀င်.. ၀န်းကျင်နိုင်ငံအားလုံး.. ဟိန္ဒူလွှမ်းခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီလို့.. အတတ်ပြောလိုမိပါတယ်..။
အဲလိုပြောလို့.. ဟိန္ဒူဝါဒ မှားတယ်မှန်တယ်.. မဟူလို..။ အချက်အလက်ကိုကောက်ပြောတာပါ..။
မနေ့ကတင်.. ဗီဒီယိုအခွေငှားကြည့်တာ.. Noah တဲ့..။
သမ္မာကျမ်း(ဟောင်း)ထဲက.. ကမ္ဘာပျက်မိုးနဲ့.. သတ္တ၀ါတွေတင်သွားတဲ့.. Ark ကြီးဇတ်လမ်း…။
ဟိန္ဒူအယူဝါဒနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်မို့.. တကယ်ပဲဖြစ်ခဲ့တာရှိသလား.. ထင်မိသေး..။
ဟိန္ဒူဝါဒက.. ဈာန်အဘိဥာဉ်..ယုံကြည်တယ်.. တကယ်လည်းလုပ်ကြတာကိုး..။
ဓမ္မတို့ရဲ့အထူးပြုစာ.. အဘိဓမ္မာထဲကျ.. ကမ္ဘာပျက်မိုးကြီးလို့.. ဆိုထားသကိုး…..။
အဲဒါလေး ပြောချင်ရင်းဖြစ်သည်… ဟူလို..။
ကျောက်တံခါးမြို့မှာ ဟိန္ဒူမိသားစုများ ပထမအကြိမ် စုပေါင်း ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်း
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဟိန္ဒူအဖွဲ့ခွဲက ဦးဆောင်ပြီး ဟိန္ဒူမိသားစုများရဲ့ ပထမအကြိမ် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့ ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲကို ဇူလိုင်(၁၈)ရက် နံနက်(၉)နာရီက ကျောက်တံခါးမြို့၊ စာတိုက်ရပ်ကွက် ဒဂုံ-ရွှေမန်းလမ်းရှိ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရစံကျောင်းတော်မှာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီစုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲမှာ မြို့ပေါ်မှ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၁၇)ကျောင်း၊ ကျေးလက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၃၇)ကျောင်း စုစုပေါင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(၅၄)ကျောင်းမှ သံဃာတော်(၁၅၄)ပါးတို့ကို ပင့်ဖိတ်ပြီး ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ ကျောက်တံခါးမြို့ ဓူတင်ကုန်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဦးကုမာရထံမှ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ဧည့်သည်တွေက ငါးပါးသီလခံယူ ဆောက်တည်ကြပြီး၊ ဆရာတော်သံဃာတော်တွေ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်တော်မူတဲ့ ပရိတ်တရားတော်တွေကို နာယူကြကာ ပစ္စည်းလေးပါးအလို့ငှာ ၀တ္ထုငွေများ လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဓူတင်ကုန်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးကုမာရထံကနေ အနုမောဒနာ တရားနာကြားကြပြီး လှူဒါန်းမှု အစုစုအတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေခဲ့ကြကာ ဆရာတော် သံဃာတော်များကို နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြတယ်လို့ သိရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
(ဦးသုမောင် အဖေ ကို တခြင်းမဟုတ် )
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်ရမယ်ဆိုရင် ခုတလော ဆုတောင်းလို့တောင် နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဟယ်။ ငါကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာသမားမို့ တောင်းဆုဆိုတာကတော့ အရံလောက်ပဲ။